Ajax Oo Waji Gabax Layaableh Ku Riday Juventus+SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ajax Oo Waji Gabax Layaableh Ku Riday Juventus+SAWIRRO
Kooxda Ajax ayaa markale kubbada cagta aduunka ka yaabsatay kadib markii ay 2-1 ku garaaceen kooxda Juventus oo marti loo ahaa waxayna Ajax markale awooday in ay koox koobka loo saadaalinayay hawada ku cuntay.
Ajax oo hore u soo reebtay kooxdii uu Cristiano Ronaldo ka soo wareegay ee Real Madrid isla markaana hore loo sheegay in uu doonayo sidii uu Los Blancos ugu muujin lahaa in uu isagu waday ayaa markiisa la tusay dariiqa looga baxo UEFA Champions league.
Ajax ayaa ku soo baxday wadarta labada kulan oo 3-2 ah waxayna hadda muujisay in ay si dhab ah uga mid tahay kooxaha xili ciyaareedkan ku guulaysan kara koobka Champions league. Ajax ayaa digniin layaableh u sii dirtay kooxaha reer England ee Man City iyo Tottenham midkii habeen danbe soo baxa.
Kaydka: Dani de Wit, Klaas-Jan Huntelaar, Daley Sinkgraven, Lisandro Magallan, Kasper Dolberg, Bruno Varela, Jurgen Ekkelenkamp
Kaydka: Rodrigo Bentancur, Andrea Barzagli, Sami Khedira, Carlo Pinsoglio, Moise Kean, Joao Cancelo, Leonardo Spinazzola
Daqiiqadii 28 aad Cristiano Ronaldo ayaa ugu danbayn jabiyay iska caabintii kooxda martida ahayd ee Ajax kadib markii uu darbo madax ah ku dhaliyay goolkan kaas oo uu caawintiisa koorne ka soo saameeyay M. Pjanić wuxuuna Ronaldo ciyaarta ka dhigay 1-0 ay Juventus hogaanka kula wareegtay.
Cristiano Ronaldo ayaa halkiisa ka sii watay rekoodhkiisa cajiibka ah ee gool dhalinta wareegyada bug baxa UEFA Champions League waxayna markan Juventus awooday in ay dadaalkii badnaa ee ay samaysay gool u badashay.
Daqiiqadii 34 aad kooxda Ajax ayaa ciyaarta si layaableh ugu soo laabtay kadib markii uu D. van de Beek awooday in uu kooxdiisa Ajax u keeno goolka muhiimada khaaska ah u lahaa ee ay ciyaarta ugu soo laabteen isaga oo caawin ka helay H. Ziyech waxayna ciyaartu noqotay barbaro 1-1 ah.
Goolkan ayaa wadarta labada kulan ka dhigtay barbaro 2-2 ah taas oo labada kooxood ugu jireen babraro ay u baahnaayeen in ay goolal kale dhaliyaan ama ay xataa waqti dheeri ah gaadhi kartay.
Juventus ayaa dardar xoogan ku raadinaysay goolka labaad laakiin Ajax ayaa kaga jawaabtay difaacasho layaableh iyo waliba weeraro ay ku doonaysay in ay markeeda ciyaarta hogaanka ugu hor marto balse qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro 1-1 ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad, tababare Maxi Allegri ayaa go’aan adag qaatay wuxuuna ciyaarta soo galiyay da’yarka xaalada fiican ku jira ee M. Kean wuxuuna saaray Pual Dybala waxayna ciyaartu noqotay mid ay koox kastaaba dadaalka ugu badan ku bixinaysay.
Daqiiqadii 67 aad Ajax ayaa neefta dib ugu celisay Juventus kadib markii uu difaaca kooxaha Yurub u waalanayaan ee Matthijs de Ligt uu dhaliyay goolka Ajax sare u qaaday wuxuuna noqday xidigii ugu da’da yaraa ee reer Holland ah gool ka dhaliyay Champions league tan iyo 1996 kii markaas oo uu Nordin Wooter isla Ajax isna gool uga dhaliyay kulankkii Panathinaikos.
Matthijs de Ligt ayaa goolkan sare ugu sii qaaday qiimihiisa suuqa kala iibsiga laakiin waxa uu kooxdiisa Ajax siiyay fursada ay ugu danbayn hogaanka ciyaarta ugala wareegtay Juventus. Laakiin Ajax ayaaba bilawday ciyaar aan la rumaysan karin iyo fursad abuuris aan caadi ahayn.
Juventus ayaa argagax waali ah dhex gashay waxayna Ajax noqotay kooxda laga filan karayay goolka saddexaad waxayna Ajax lumisay fursado layaableh oo ay ciyaarta si buuxda hurdada ugu diri kareen.
Daqiiqadii 81 aad Ajax ayaa gool cajiib ah keensatay kadib markii ay Juventus ceebeeyeen Neres iyo Ziyech laakiin dabaal degii Ajax ayaa la soo gaabiyay markii VAR uu cadeeyay in uu offside jiray.
Daqiiadii 90 aad Juventus ayaa ku dooday in ay rekoodhe heshay kadib markii kubbad uu soo karoosay Bentancur ay gacanta kaga dhacday Bild laakiin garsooraha ayaa la tashaday VAR wuxuuna go’aamiyay in ayna rekoodhe ahayn.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-1 ay Ajax ku garaacday Juventus oo gurigeeda joogtay waxayna sidaa Ajax ugu soo baxday afar dhamaadka UEFA Champions league iyada oo Juventus ka tuurtay tartanka kooxaha Yurub ee Champions league.